मकर राशिमा बुधको प्रवेश : यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ ! – Khabar Silo
मकर राशिमा बुधको प्रवेश : यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
Posted on January 20, 2020 January 20, 2020 Author admin Comment(0)
बुधले केहि दिन अगाडी राशि परिवर्तन गरिसकेको छ। अब बुध आउने जनवरी ३१ सम्म मकर राशिमा हुनेछ। बुधले राशि परिवर्तन गर्दा हरेक राशिमा फरक-फरक प्रभाव पर्छ।ज्योतिषीहरुका अनुसार बुधको राशिपरिवर्तनले सबै भन्दा निम्न चार राशिलाई लाभ पुर्याउनेछ।
दशम कर्मभावमा बुधको गोचरले तपाईको लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ, विशेष गरी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिका लागि यो परिवर्तन निकै सुखद रहनेछ। व्यवसायमा पनि प्रगति हुने देखिन्छ, तर लेनदेनको मामिलामा भने होशियार हुनुहोला। योजनाहरु गोप्य राखे उपलब्धिको संभावना अधिकतम देखिन्छ।
भाग्यमा बुधको गोचरले आर्थिक पक्षलाई शुद्ध बनाउनुका साथै विदेश यात्रा सम्बन्धित सबै योजनाहरुको समृद्धि हुने योग रहेको छ। बैदेशिक रोजगारका लागि पनि राम्रो अवसर प्राप्त गर्नुका साथै राम्रो लाभ पनि मिल्ने देखिन्छ। धर्म-कर्ममा ध्यान जानेछ। आफन्तबाट सहयोग प्राप्त होला।
विवाह सम्बन्धी समस्याहरु पनि हट्नेछ। विवाहित जीवनमा मिठोपन आउँनेछ। यो समय ब्यापारमा लागि पनि निकै शुभ देखिन्छ। काममा पदोन्नति हुने योग रहेको छ। मन प्रशन्न रहनुका साथै अधुरा कामहरु पुरा हुने देखिन्छ। साथिभाइको साथ पाइएला।
बुधको गोचरका कारण सम्बन्धलाई शुद्ध पार्नुका साथै लाभ पनि दिनेछ। अधिक ऋण, लेनदेन र गोप्य दुश्मन बेवास्ता गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोस्। क्षेत्र बाट काम व्यवस्थित गरेर सिधा घर आउनु उत्तम हुन्छ। तपाईं ग्रामीण इलाकामा यात्रा को लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। सावधानीपूर्वक गाडी चलाउनुहोस् दुर्घटनाबाट बच्नुहोस्। स्वास्थ्यको लागि सतर्क रहनुहोस्।
ग्रहहरुको युवराज मानिने चन्द्रपुत्र बुध ग्रह ३१ मार्च दिउसो १२ बजेर ५५ मिनेटदेखि कुम्भ राशिबाट मीन राशिमा प्रवेश गर्दैछ। यस राशिमा यो १६ अप्रिल बेलुका ९ बजेर ९ मिनेटसम्म अवस्थित रहनेछ, जसपछि यो मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। बुध ग्रहलाई मीन राशिमा नीच मानिन्छ। बुध ग्रहलाई चंचल भ्रमणशील र मिलनसार राशि मानिन्छ। मिथुन र कन्या राशिको […]
पाथिभरा माताले तपाईको मनोकांक्षा पुरा गरुन, कार्तिक २६ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल कार्तिक २६ गते बुधबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर ११ तारीख कार्तिक कृष्णपक्ष एकादशी तिथी उत्तरफल्गुनी नक्षत्र वैधृति योग बालव करण चन्द्रमां सिंह राशिमा प्रातः ०८:४३ बजे सम्म पश्चात कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा प्रवद्र्ध योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु रमा एकादशी व्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, […]
Posted on April 9, 2021 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल चैत्र २८ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १० तारीख चैत्र कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथी पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र पश्चात उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र ब्रम्ह योग भद्रा करण चन्द्रमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा सौम्य योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु दर्शश्राद्ध,निशिबार्ने, घोडेजात्रा,भद्रकालीपीठमालिङ्गो उठाउने(ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, […]